တရုတ် - အာရှအလယ်ပိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းမကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - Suzhou Sohologistics CO ။ , LTD ။
အာရှအလယ်ပိုင်းသည်အနောက်ဘက်ရှိကက်စပီယန်ပင်လယ်မှအရှေ့ဘက်တွင်တရုတ်အထိ၊ တောင်ဘက်တွင်အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်အီရန်နိုင်ငံမှမြောက်ဘက်တွင်ရုရှားအထိကျယ်ပြန့်သည်။ ကာဂျစ္စတန်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ၎င်းတို့သည်ဘုံနိုင်ငံရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဒေသတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးမြင့်မားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတူညီမှုရှိသည်။
ရိုးရှင်းသောကုန်တင်ကားများ၊ လေးလံသောကုန်တင်ကားများ၊ ဇင်ကျန်း Horgos၊ Alashankou laoyemiao၊ Hongshanzui၊ Dulata, Baktu, Jeminay, torugart, kashgar, Irkeshtam, Karasu, Khunjerab တို့သို့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာရောဂါဗေဒသည် kazakhstan, kyrgyzstan, uzbekistan, Tajikistan ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိကဖြတ်သန်းမှုလမ်း ဦး တည်ရာနိုင်ငံများ
နယ်ပယ် မြို့တော် / ကောင်တီ နိုင်ငံ
ကျန်း Horgos ကာဇက်စတန်
Alataw Pass ကာဇက်စတန်
Xinjiang သည်ကီလိုမီတာ ၁.၆ သန်းကျော် (စတုရန်းမိုင် ၆၄၀,၀၀၀) ကျယ်ပြန့်ပြီးတရုတ်၏ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနခွဲနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ် ၈ အကြီးဆုံးနိုင်ငံခွဲဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဗဟိုအာရှ၊ အနောက်အာရှ၊ တောင်အာရှနှင့်ဥရောပနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရိုးရာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများစွာရှိသည်။
နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်လှစ်သောနည်းဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် ၂၁ ရာစုရေကြောင်းပိုးလမ်းနှင့် "တစ်ခါးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလမ်း" ပိုးလမ်းစီးပွားရေးစီးပွားရေးခါးပတ်တို့သည်မြန်ဆန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ 21 ခုနှစ်တွင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုဆိပ်ကမ်းအများအပြားဖွင့်လှစ်နေကြသည်။
Main Passes ဦး တည်ရာနိုင်ငံများ
ဧရိယာ မြို့တော် / ကောင်တီ နယ်နိမိတ်တိုင်းပြည်
သဲခုံ Laoyemiao မွန်ဂိုလီးယား
ချစ်သူ Aheitubik ကာဇက်စတန်
Bortala Mongol ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု Alataw Pass
Ili Kazak ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ Horgos
Ili Kazak ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒူလာတာ
Ili Kazak ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မူဆယ်
Kizilsu Kirghiz ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု တူရကီ ကာဂျစ္စတန်
Kizilsu Kirghiz ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု Erkeshtam
Kashgar Khunjerab ပါကစ္စတန်
၁။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှခွင့်ပြုထားသောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်လေးလံသောနှင့်အလွန်ကြီးသောကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရည်အချင်း
အကောင်းဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကြောင့် 3. ယှဉ်ပြိုင်ကုန်တင်နှုန်းထားများ
4. GPS စနစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်
၇။ ကုန်တင်ယာဉ်အပြည့်တင်ဆောင်ခြင်း (FTL) ကုန်တင်ကုန်ချဝန်ဆောင်မှု
၈။ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများနည်းသော (LTL) ကုန်တင်လုပ်ငန်း
မြို့ / စခန်း မြို့ / စခန်း STATION ကုတ် Khorgos မှ(ကီလိုမီတာ)
Aktobe ကျောက်တံတား 689607 2600
အယ်လ်မတီ Alma-Ata 700007 360
ကော့သောင်း ကော့သောင်း 687008 1850
Kostanay ကူတိုန် 684001 2250
Petropavlovsk Petropavlovsk 820001 2050
семей သီလ 709508 1200
တာကီစတန် တာကီစတန် 697800 1250
Uralsk Uralsk 665602 3050
ангрен ဒေါသ 722608 1300
Andijan Andizan 742003 1550
Nukus Nukus 739007 2300
Tashkent Tashkent 697800 1250
Ургенч ဥရမ်ချီ 738305 2150
Fergana ဖာဂူဆန် 742601 1500
балканабад ဘော်လကန်နဘတ် 754007 5150
Turkmenbashi Turkmenbashi 754505 5000
ခင်ဗျား မာရိက 751309 4500
ဒူရှန်းဘီ ဒူရှန်းဘီ 745205 1600
лениннабад လီနင်နာဘတ် 747802 1400
ဘီရှ်ကတ် ဘီရှ်ကတ် 716700 600
Central Asia သို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သင့်တော်သနည်း။
ကွန်တိန်နာငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုမရရှိနိုင်သည့်ရထားလမ်း
အာရှအလယ်ပိုင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မည်သည့် incoterm ကိုသုံးပါသလဲ။
incoterms DDU (ပို့ဆောင်ပေးသော Duty Unpaid အမည် ဦး တည်ရာနေရာ) နှစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသတ်မှတ်ထားသော ဦး တည်ရာသို့ Duty Unpaid နှင့် DAP - Delivery destination သို့ရောက်သည်။